Dani/ Madoobe: “Ayagii la dulsaarnaa hadii raali ku yihiin, oo maxa anaga noo gaara” - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaDani/ Madoobe: “Ayagii la dulsaarnaa hadii raali ku yihiin, oo maxa anaga...
Qoraaladii maanta ka soo baxay dowlad goboleedyadda Puntland and Jubaland ayaa waxaa si kajan ama Jees jees ah loogu sheegay in ay soo dhaweynayaam heshiiskii shirkii beelaha Hawiye iyo qaarkamida xukuumada.
Qoraalka ayaa yimid ka dib markii midowga musharaxiinta garabka Hawiye ay go’aansadeen in ay la falgalaan hogaanka Farmaajo.
Labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland oo in mudo ah hortaagnaa Farmaajo iyo hogaankiisa kali talisnimo, ayaa waxa balan fur ku sameeyay Midowga Musharaxiinta garabkabeesha Hawiye, kuwaasayaa iyaga oo aan dignity siinin uga baxay balantii ahayd in meel looga soo wadajeasto Farmaajo.
MOL oo la hadashay mas’uuliyiin ku dhaw dhaw Sacid Deni iyo Axmad Madoobe ayaa sheegay in ayLabada hogaamiye ay aad uga xunnyihiin in qadiyadii la dhaxeeysa umadda Soomaaliyeed in la qabiileeyay.
Waxa ayna yiraahdeen “ “Ayagii la dulsaarnaa hadii raali ku yihiin, oo maxa anaga noo gaara”
Saciid Deni ayaau sheegay qaar kamida Wasiiradiisa in uu go’aansasay in hada iyo wixi ka danbeeyo uu faraha ka qaadohowlaha federaalka waqtina uu galiyo arimaha Puntland.
Dadka yaqaano Farmaajo ayaa sheegaya midowga musharaxiinta garabka Hawiye ay si xun uga shalaayn doonaan taageerida dadban ay la siiyeen Farmaajo. Waxaana aadkaan doonta in ay markale taageero ka helaan Pubtland iyo Jubbaland.